Ogaden News Agency (ONA) – OYSU-Perth oo shir heersare ah isugu yimid
OYSU-Perth oo shir heersare ah isugu yimid
Ururka OYSU-Perth ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25/04/12 ku qabtay shir aad u heer sareeya magaalada perth ee carigaas iyo Australia. Shirkan ayaa haa mid looga gollahaa gaadhsiinta qadiyada Ogaadeenya da’yarta ku dhaqan magalada perth ee ayagu kasoo jeeda wadanka Ogaadeenya. Shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro aad u tira badan oo iisugu jira gabdho iyo wiilal kuwaas oo ay ka muuqatay waji farxad iyo reenrayn ay ku dheehantahay.
Oogu horaynba sida ururka OYSU u caadada ah waxaa lagu furay aayado qur’aan ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay fadiilatu Sheekh Cabdiqadir Cali Guray. Waxa uu sheegay sheekhu in wax walbe uu oogu horeeyo Alle kacabsi, fullinta awaamirta eebe iyo ka fogaanshaha wax walbe uu Alle (SW) naga xarimay. Waxa intaas uu raaciyay hadalo qiimo wayn leh oo uu ku gubaabinayo da’yarta sida ay ooga soo bixi lahaayeen kaalinta laga doonayo in ay ka qaataan halganka gobanima doonka ah ee kasoconaya dalka Ogaadeenya.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay masraxa gudoomiyaha ururka Dhalinyarada iyo Ardayda OYSU-Perth Mudane Yahye Sheekh oo warbixin kabixiyay sababta maanta shirka loo qabtay iyo natiijada uu ururku kadoonayo shirkan in lagu gaadho. Waxa uu sheegay halgamuhu in dhawaanahanba maamulka ururuku uu ku qorshe-jiray soo bandhiga qadiyada shacbka dulman ee Ogaadeenya loo soo bandhigayo dhamaanba da’yarta S.Ogaadeenya ee ku dhaqan magaalada Perth asaga oo intaas ku daray kulamada noocan oo kale ah ee lagula kulmayo bulshada qaybaheeda kala duwan ay sii socon doonaan.
Waxa kaloo uu ka hadalahay gudoomiyaha ururka Dhalinyarada Iyo Ardayda faafaahin dheerna uu kabixiyay aasaaskii Midawga Dhalinyarada & Ardayda S.Ogaadeenya iyo sababta kaliftay in la mideeyo awooda, cududa, caqliga, tamarta, fikirka iyo maskaxda ee ay leeyihiin da’yarta S.Ogaadeenya ee ayagu ku kala nool daafaha dunida.
Shirka oo uu jawiguusu wacnaa ayaa waxaa laga shiday cajal muuqaal ah oo ay soo diyaariyeen qayb kamid ah bahwaynta OYSU oo kahadlayay xadgudubka iyo tacadiyada gunmaysigu kuhayo dalka Ogaadeenya. Waxaa kaloo la arkayay sawiro aad iyo aad dareenka dadka kiciyay kuna reebay murugo iyo tiiraanyo, sawirada ayaa ahaa kuwo ka turjumaya dilka, xasuuqa, kufsiga, xadhiga, jidh dilka iyo guryo gubidda lagu hayo shacabka aan waxba galabsan ee Ogaadeenya.
Hadaba kadib daawashada cajalka ayaa waxaa ka hadlay shirka Marwo Nimco Shariif oo kamid ah maamulka OYSU-Perth oo ayadu oogu baaqday da’yarta madasha fadhiday in ay soo garab istaagaan dadkooda dulman iyo dhulkooda dhacan oo ay ka dhiidhiyaan. Marwo Nimco waxa ay intaas raacisay in dhamaanba loo guntado sidii midnimada, mintidka iyo isku tashiga da’yarta S.Ogaadeenya loo sii xoojin lahaa isla markaana looga hortagi lahaa shirqoolada cadawga uu kadhax maleegayo bulsha waynta Ogaadeenya khaas ahaan da’yarteeda.
Waxaa iyana si wanaagsan loogu soo dhaweeyay shirka Abwaanada wayn ee Rooda Afjano oo ayadu kaalin libaax ka qaadatay qaban qaabinta iyo kasoo shaqaynta shirka. Afjano oo oogu horaynba kubilaawday mahadnaq iyo bogaadin ay usoo jeedisay dhalinyarada iyo ardayda sida wanaagsan ee ay ooga soo qaybgaleen shirka iyo sida wacan ee ay oogu soo dhaweeyeen madashaba. Waxa ay shegatay abwaanadu in maanta maalintii dhalinyarada tahay, umaddii ay dhalinyaradoodu u istaagto aytahay umadda kali ah ee hormar samayn karta ayada oo tusaale u soo qaadatay kacdoonka kajira maanta dhulalka carbeed ee ay dhalinyaradu hormuudka kayihiin. Waxa ay isla markaana kula dardaarantay in dhamaan gacmaha la siqabsado lana soo garab istaago halganka gobanima doonka ah lagana mid noqdo sida loo dhanyahayba Dhalinyarada iyo Ardayda S.Ogaadeenya ee OYSU kuwaas oo u taagan habeen iyo maalinba sidii looga dul qaadi lahaa gumaysiga maxaysatada ah ee ku habsaday dhulka Ogaadeenya.
Ogu danbayntii shirkan ayaa ahaa mid si wanaagsan kusoo dhamaaday isla mar ahaantaana jawi caafimaad qaba ay kamuuqatay taniyo inta uu furmay shirku. Waxa ay da’yartu ku gaadhay shirkan in dhamaanba taageero hiil iyo hooba ay lagarab istaagayaan halganka shacabka S.Ogaadeenya, sido kalena ay balan qaadeen in ay kamid noqonayaan ururka OYSU.